Vaovao - inona ny fahasamihafana misy eo amin'ireo sambo mpanjono manana savaivony kaopy 3000 sy savaivony kapoaka 4000?
Misy fahasamihafana telo eo amin'ny sambo mpanjono 3000 sy 4000. Ny halavan'ny tsipika fanjonoana dia samy hafa ao anaty kaopy, ny hafainganam-pandehan'ny fandraisana, ary ny lanjan'ny sambon'ny mpanjono dia samy hafa;
Rehefa mampiasa sambo mpanjono an-dranomasina, ny fenitra maodelin'ny sambo mpanjono dia matetika no voamarika amin'ny teny toy ny xxx-3000 sy xxx-4000. Avy eo ny 3000 sy 4000 eto dia midika ny masontsivana amin'ny savaivony kaopy. Inona ny savaivony kaopy? Rehefa mihodina ny kaopy mihodina, ny savaivony ivelany amin'ny vatan'ny kaopy dia antsoina hoe savaivony kaopy; Raha marika maherin'ny 3000 ny maodelin'ny sambo mpanjono dia midika izany fa 3cm ny savaivony ivelany an'ny kaopy mihodina. Raha voamarika amin'ny 4000 ilay maodely, 4cm ny savaivony ivelany an'ny kaopikan-tsambo mihodina. Amin'ny fampitahana, raha toa ka 5000/6000 ny maodelin'ny sambo mpanjono, dia midika izany;
Ankoatry ny fanomezana ny mpanjono ny fahaizan'ny savaivon'ny kaopy, ny karazany roa amin'ny masontsivana marihina dia afaka manampy azy ireo hahatakatra tsara kokoa ny savaivon'ny kaopy. Ny sambo fanjonoana manana savaivony samy hafa amin'ny kaopy dia afaka manidina ny halavan'ny fanjonoana. Rehefa mifanaraka dia tsy mitovy ny fitondrana rano ampiharina. Na dia hafa aza ny halavan'ny tsoraka fanipazana dia tsy mitovy ny fisafidianana; Misy fahasamihafana roa lehibe eo amin'ny sambo mpanjono 3000 sy 4000
Ny fahasamihafana voalohany, ny laharana mitovy, ny sambo mpanjono 4000 noho ny sambo mpanjono 3000, ny halavan'ny tsipika mihodina dia lava kokoa
Ny savaivony kaopy isan-karazany amin'ny sambo mpanjono dia mitarika amin'ny halavan'ny fanjonoana kambana. Ho an'ny ankamaroan'ny sambo fanjonoana dia hisy andiana isa eo amin'ny kapoaka, toy ny xxx-3000-0.32 / 150. Amin'ity andian-tarehimarika ity, XXX no marika an'ny sambo mpanjono, 3000 dia manondro ny savaivon'ny kaopy, ny 0.32 no savaivony mifanaraka amin'ny savaivon'ilay sambo fanjonoana, ary ny 150 no halavany tsara indrindra amin'ny sambo manjono voaharo miaraka amina fanjonoana, izay dia 150 metatra.
Raha jerena, 0.32 no savaivon'ny tariby amin'ny tsipika 4. Raha ampiasaina ny laharana tariby eo ambanin'ny andalana 4, mazava ho lehibe kokoa noho ny 150 metatra ny halavany mihodina;
Raha lazaina amin'ny fomba hentitra, satria ny mpanamboatra jono isan-karazany dia tsy afaka mampifanaraka tsara ny savaivon'ny tsipika, ary ny mpanamboatra sambo mpanjono samy hafa dia afaka mampiray ny savaivon'ny kaopy, fa ny halalin'ny kaopy kosa tsy afaka mifanaraka. Noho izany, marika samy hafa, na dia mifanaraka aza ny savaivon'ny kaopy, dia tsy maintsy misy lesoka amin'ny halavan'ny fanjonoana mihodina. Raha toa ka mampiasa marika maromaro amin'ny tsipika fanjonoana izy ireo dia vao mainka ho lehibe kokoa ny lesoka;
Fehiny: arakaraka ny haben'ny savaivon'ny kaopy misy ny sambo mpanjono, dia lava kokoa ny halavan'ny tsipika azo soratana amin'ny savaivony sy ny laharana mitovy aminy. Sambo mpanjono 3000 sy 4000 no mampiasa laharana mitovy, ary sambo fanjonoana 4000 afaka mivezivezy tsipika lava kokoa;
Fahasamihafana 2: sambo mpanjono 4000 mandray sambo mpanjono haingana kokoa noho ny 3000
Ny savaivon'ny kaopy no masontsivana amin'ny savaivony ivelany amin'ny sambo mpanjono. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia ny halavan'ny faribolan'ny tsipika fanjonoana manodidina ny kaopy mihodina. Avy eo mivadika faribolana ihany koa ny sambo manjono. Sambo mpanjono 3000 no miverina maka ny jono 3cm ary sambo fanjonoana 4000 miverina mitondra ny jono 4cm; Vokatr'izany dia sambokely manjono 4000 no afaka mandray haingana kokoa noho ny sambo mpanjono 3000;
Izy io dia misy dikany lehibe indrindra amin'ny fisafidianana sambo mpanjono. Ohatra, mampiasa sambo mpanjono 2000 matetika isika mihoatra ny 3000 sambo manjono. Tsy fantatsika ve fa sambo mpanjono 3000 no mihoatra ny 2000 ny sambo manjono? Satria ny sambo mpanjono 3000 dia miadana miadana ary mitaky frein avo kokoa; Amin'izany fomba izany, miaraka amin'ny hafainganam-pandeha haingam-pandeha sy miadana, azo ahena ny fahaverezan'ny famaky kodiarana, ary azo hatsaraina tsara ny fahombiazan'ny fifehezana trondro;
Ny maha samy hafa azy dia ny sambo jono 4000 somary mavesatra sy lehibe kokoa noho ny sambo mpanjono 3000
Rehefa mihalehibe ny savaivon'ny sambon-jono dia ho somary lehibe kokoa ny halalin'ny kaopy andalana. Rehefa mitovy ny isan'ny famaky, ny haben'ny sambo fanjonoana 4000 dia ho lehibe kokoa noho ny sambo mpanjono 3000, ary ny lanjany dia hitombo ho lehibe kokoa;
Amin'izany fomba izany, satria samy hafa ny hahavony, ny bikan'ny vatana ary ny halavan'ny tanan'ny mpanjono, dia azo ampiasaina amin'ny tsato-kazo lava samy hafa izy ireo; Ny anton'izany dia ny tsy fisian'ny fenitra ho an'ny karazana sambon'ny mpanjono sy ny halavan'ny tsorakazo;
Ny fahasamihafana telo etsy ambony eo amin'ny sambo mpanjono 3000 sy ny sambo mpanjono 4000 dia aseho amin'ny ady tena izy. Azo takarina fa raha lehibe ny faritra fanjonoana ary tsy kely ny trondro kendrena dia tsara kokoa ny vokatry ny fampiasana sambo fanjonoana 4000. Rehefa dinihina tokoa, miaraka amin'ny isa mitovy tsipika, ny sambo mpanjono 4000 afaka rivotra tsipika bebe kokoa sy milalao lavitra kokoa; Mifanohitra amin'izany no izy, raha kely kokoa ny velaran'ny rano ary kely kokoa ny trondro kendrena, dia lawa 3000 no ho trondro.
Fotoana fandefasana: Jul-09-2021